बिज्ञान-प्रबिधि | mulkhabar.com
मोबाइल फोनको बीमा हुने
काठमाडौँ-मोबाइल हरायो, बिग्रियो भनेर अब चिन्ता गर्नु नपर्ने भएको छ । मोबाइल सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिँदै प्रिमियर इन्स्योरेन्सले मोबाइल बीमा योजना शुरु गरेको छ । आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा ‘मेरो सुरक्षा प्रालि’ र प्रिमियर इन्स्योरेन्सबीचमा मोबाइल बैंकिङसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मेरो सुरक्षाले दिँदै आएको मोबाइल सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनेको मोबाइल बीमा गराउने […]
Posted in कभर स्टोरी / फिचर,बिज्ञान-प्रबिधि Read More »
एजेन्सी। सिंगापुर-विश्वकै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले एसियामा पहिलोपटक सिंगापुरमा एक अर्ब अमेरिकी डलर लगानीमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न लागेको बिहीबार घोषणा गरेको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरिने यो सेन्टर सन् २०२२ सम्ममा सञ्चालनमा आउनेछ।यो सेन्टरमा फेसबुकको सर्भर रहनुका साथै सूचना प्रविधिका कार्यलाई एकीकृत गरिने फेसबुकका उपाध्यक्ष थोमस फरलङले बताए। करिब एक लाख ७० हजार वर्गफिटमा फैलिने ११ […]
Posted in बिज्ञान-प्रबिधि Read More »
दस वर्षमा साढे सात हजार मोडलका मोबाइल सेट भित्रिए नेपालमा
काठमाडौ, २८ भदौ नेपालमा दस वर्षको अवधिमा करिब साढे सात हजार मोडलका मोबाइल सेट भित्रिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सन् २००८ दखि हालसम्म सात हजार तीन सय भन्दाबढी मोडलका मोबाइल सेट भित्रिएका हुन् । सन् २००८ देखि उपकरण आयात गर्दा टाइप अप्रुभल लिनुपर्ने नियम लागू भएको थियो । प्राधिकरणले नेपालमा उपयोग र आयात […]
Posted in बिज्ञान-प्रबिधि,मुख्य समाचार Read More »
जर्मन कम्पनी भक्सवागनका गाडीले वातावरणलाई प्रतिकुल असर पार्ने
काठमाडौैंं, २७- चारपांग्रे सवारी साधन उत्पादक जर्मन कम्पनी भक्सवागनद्वारा बिक्री गरिदै आएका सवारी साधनले वातावरणलाई प्रतिकुल असर पार्ने कार्बन उत्सर्जन गरेको तथ्य भेटिएको छ।उक्त तथ्य फेला परेपछि विश्वका थुपै्र मुलुकमा त्यस्ता गाडीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकिएकको छ तर यसबारे नेपालमा भने हालसम्म सोधखोज भएको पाइएको छैन। सवारी प्रदुषण जाँच्ने यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा राखेको […]
Posted in बिजनेस / अर्थ,बिज्ञान-प्रबिधि Read More »
अब २ जीमा गुगल क्रोेम फास्ट चल्ने
काठमाडौं, २३ भदौ । जाभा स्क्रिप्टका कारण वेब पेज ओपन गर्दा एडभरटाइजमेन्ट पप अप्स यसमा लोड हुन्छ । त्यसैगरी धेरै प्लग इन पनि लोड हुन्छ र वेब पेज खुल्न ढिलो हुनुका साथै बढी डाटासमेत खपत हुन्छ, तर अब टुजी नेटवर्कको अवस्थामा भने जाभा स्क्रिप्ट अटोमेटिक रूपमा डिजेबल हुनेछ । यसका कारण युजरले क्रोम चलाउँदा अब […]
ल्यापटपको सुरक्षा कसरी गर्ने ? यी टिप्स थाहा पाउनुहोस्
-शर्मिला शर्मा, आइटी इन्जिनियर सूचना प्रविधिको विकाससँगै मानिसका लागि ल्यापटप र स्मार्टफोन अनिवार्य आवश्यकताजस्तै बन्न थालेको छ । तर, ल्यापटप प्रयोग गर्दा केही सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । ल्यापटप प्रयोग गर्दा यस्ता सावधानी अपनाएमा लामो समय टिक्न सक्छ : – ल्यापटप चलाउने वेला जहिले पनि समतल र कडा ठाउँमा राख्नुपर्दछ । ल्यापटपको तल्लो भागमा ताप आउने […]
मोवाइल : ‘डिजिटल ड्रग’!
तपाईंका साना बालबच्चा छन् ? बालबच्चाको हेरचाह कसरी गर्नुहुन्छ? आफ्नो व्यस्त दैनिकीसँग जुँध्दै गर्दा तपाईंले आफ्ना नानीबाबुको रेखदेखका लागि मोबाइलको प्रयोग बढी प्रयोग त गर्नुभएको छैन्? अहिले बालबालिकाहरु मोबाइल बिना कुनै काम नगर्ने भन्दै अड्डी कस्ने गर्दछन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु सबै अभिभावकको काम हो । हुन पनि मोबाइलमा उनीहरुले मनपराउने कार्टुन मन लगाएर […]
सुनकोसीको सबै वडामा बिद्युतिय हाजिरी
ओखलढुङ्गा। ओखलढुङ्गाका स्थानिय तहहरुले बिद्युतिय हाजिरीको अभ्यास थालेका छन् । स्थानिय सरकारका रुपमा स्थापित नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा पालिकाहरुले बिद्युतिय हाजिरीको अभ्यास थालेका हुन् । कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई कामप्रति थप जिम्मेवार बनाउन बिद्युतिय हाजिरीको प्रयोगलाई जोड दिएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाँउ सम्म पुर्याउन निर्वाचित भएका जनप्रतितिधिहरुले स्थानिय तहबाट काम थालेसंगै पहिलो प्राथमिकता जिम्मेवार […]
Posted in देश,बिज्ञान-प्रबिधि Read More »
अब फेसबुकमा हिस्ट्री डिलिट गर्ने सुविधा , डेटिङ सेवा पनि आउँदै
–फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई नयाँ फिचरसहितको सेवा दिने घोषणा गरेको छ । फेसबुकको घोषणा अनुसार अब प्रयोगकर्ताले ब्राउजिङ हिस्ट्री डिलिट गर्ने सुविधा पाउने भएका छन् । फेसबुक संस्थापक मार्क जकरबर्गले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । क्यालिफोर्नियामा आयोजित फेसबुक कम्पनीको वार्षिक एफएट सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जकरबर्गले फेसबुकको हिस्ट्री डिलिट गर्नको लागि ‘क्लियर हिस्ट्री’ नामक टुल उपलब्ध गराईनेछ […]
इन्टरनेट सेवामा बढेको मूल्य फिर्ता
काठमाडौं । दूरसञ्चार कर लागू भएपछि बृद्धि भएको इन्टरनेटको मूल्य फिर्ता भएको छ । इन्टरनेटको मूल्य समायोजनबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलमा साउन १ गतेखि बढाइएको मूल्य हटाउने सहमति भएको हो । इन्टरनेटको मूल्यलाई वैज्ञानिक बनाउने मन्त्रालयको पूर्वघोषणा अनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्ने सहमति भएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए । सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार […]